ဂျစ်တူး ချစ်ဖူးသွားပြီ – Grab Love Story
ရေးသူ – မြင့်ထွေး (ရတနာပုံ)
“အင့် .. အမေ့ .. ကျွတ် .. ကျွတ် .. ကောင်းကောင်း .. ကောင်းတယ်ကွယ် “
“နာ … နာလေးဆောင့် .. ဆောင့် … အင်း … ဟုတ်ပြီ .. အမေ့ .. ရီှး.. ကျွတ် … ကျွတ် .. ဟုတ်ပြီ .. “
“အင့် … အား … ဟင်း … အင်း .. မောင်လေး … မမ .. မမတော့ .. မင်း … မင်း လီးကြီးကို စွဲ .. စွဲသွားပြီကွာ .. အင့် .. ဟုတ်ပြီ … အင့် … “ ရမ္မက်သွေးတွေ ယှက်ဖြာနေသော မတင်ရီ မျက်နှာကြီးမှာ အလွန် စွဲမက်နှစ်သက်စရာ ကောင်းလှသည်။ ကာမရာဂပြင်းထန်လှသော မျက်နှာကို ကြည့်၍ ဂျစ်တူးစိတ်တွေ ပ၍ို ပ၍ို ပြင်းထန် တက်ကြွလာသည်။ သည်တော့ မာန်ဖီနေသော ကျားရိုင်းတစ်ကောင်ပမာ ဆောင့်ချက်တွေက ကြောက်ခမန်းလလိ ပြင်းထန်လာသည်။ အချက်တစ်ရာခန့် ဆောင့်ပြီးသောအခါ မတင်ရီ တစ်ကိုယ်လုံး ကြိုးနှင့် အတုတ်ခံလိုက်ရသလို တင်းကနဲ ဖြစ်သွားသည်။ သူမ လက်နှစ်ဖက်က ဂျစ်တူး လက်နှစ်ဖက်ကို တင်းနေအောင် ကုတ်ဖက်ထား၏။ သူမတစ်ကိုယ်လုံး လေဟာပြင်ထဲ မြောက်တတ်သွားသလို ဖြစ်ကာ ဟင့်ကနဲ ဟင့်ကနဲ တဆတ်ဆတ် တုန်ခါသွားပြီး စောက်ရေများကို တပျစ်ပျစ် ဒလဟော ပန်းထွက်ကုန်တော့သည်။
စောက်ဖုတ်အတွင်း ကြွက်သားတွေက အားနှင့် ညှစ်ထည့်လိုက်သောအခါ ထိုညှစ်လိုက်သော အခိုက်နှင့် လီးကို နှုတ်လိုက်သောအခိုက်မှာ တိုက်ဆိုင်သွားသည်။ ဒစ်ဆံကြီးတစ်ခုလုံး ကျဉ်ကနဲ ဆိမ့်တက်သွားပြီး လီးချောင်းတစ်ခုလုံး ကြွလာသည်။ အားနှင့် ပြန်ဆောင့်အထည့်တွင် ဂျစ်တူးတစ်ကိုယ်လုံး ဓါတ်လိုက်သလို တုန်ခါသွားပြီး လရေပူတွေ ပန်းထုတ်ကုန်၏။ ထိုအခိုက်သည် ကာမသုခ အပြည့်အဝ ရရှိသော အခိုက်ဖြစ်၍ အလွန်ထူးခြားသော ကာမအရသာကြီးကို အကောင်းဆုံး ခံစားလိုက်ရပါတော့သည်။ ဂျစ်တူး တစ်ကိုယ်လုံး မတင်ရီ ကိုယ်ပေါ် မှောက်ကျသွားသည်။ မတင်ရီ၏ ပေါင်နှစ်ချောင်းမှာလည်း တွေဲ လာင်းကြီး ကျသွားသည်။ သူမလက်နှစ်ဖက်ကလည်း ဘေးသို့ ဗရမ်းဗတာကြီး ပစ်ကျသွားတော့သည်။ ဂျစ်တူးက သူ့လီးတန်ကြီးကို မတင်ရီ စောက်ခေါင်းထဲသွင်းမြုပ်ရင်း မှိန်းနေသည်။ စောက်ဖုတ် အတွင်းသားတွေက ဒုတ်ကနဲ ဒုတ်ကနဲ လှုပ်နေသည်ကို သူ့လီးတန်ကြီးက တဆင့် သိနေရသည်။ သူဖတ်ဖူးထားသော စာအုပ်တွေထဲက အတိုင်းဆိုလျှင် မိန်းမတွေ ဆန္ဒြုပည့်ဝ၍ ပြီးဆုံးလျှင် ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထေ့ ရှိသော သဘာဝ လက္ခဏာဟု နားလည်လိုက်သည်။ သူတိ်ု့နှစ်ယောက် လိုးနေကြသည်မှာ တစ်နာရီကျော်ကျော် ရှိခြဲ့ပီ။ ဂျစ်တူးက တောင်ဘက်အဝင်ပေါက်ထိပ်တွင် ချိတ်ထားသော နံရံကပ် နာရီကို ကြည့်လိုက်ရာ ၂နာရီ ၄၅မိနစ် ရြှိပ။ီ အင်တိုက်အားတိုက် လိုးလိုက်ရသဖြင့် လူလည်း အတော်ပင်ပန်းသွား၏။ မတင်ရီဆိုလျှင် ယခုအချိန်ထိ မျက်လုံးစုံမှိတ်၍ မှိန်းနေဆဲ ဖြစ်သည်။ တစ်ခါမှ မတွေ့ကြုံ မခံစားဖူးသော ကာမအရသာကြီးကို လွတ်လွတ်လပ်လပ် စိတ်ရှိလက်ရှိ ခံစားလိုက်ရသဖြင့် ဂျစ်တူးမှာ အလွန်ကျေနပ်နေသည်။ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်သည့်တိုင် ကျန်းမာသန်စွမ်း သွေးအားတွေ ပြည့်လျှမ်းနေသည့်အရွယ်မို့ စောက်ခေါင်းအတွင်းရှိ လီးတန်ကြီးမှာ မာန်ကြွထောင်ထလာပြန်၏။
နွေး ထွေးနူးညံ့သော စောက်ဖုတ် အငွေ့ဓါတ်ကလည်း တစ်ဖန် နိုးကြွလာစေရန် အားပေးအားမြှောက် ထောက်ပံ့လျှက် ရှိသည်။ ဂျစ်တူးက ကိုယ်ကို အနည်းငယ်မတ်၍ လက်နှစ်ဖက်ထောက်ကာ မတင်ရီ မျက်နှာကို အုပ်မိုး၍ ကြည့်လိုက်သည်။
၃၅-နှစ်အရွယ် အအိုပင် ဖြစ်သော်လည်း မတင်ရီ မျက်နှာက စွဲမက်ဖွယ် ကောင်းလှ၏။ မျက်နှာကျ အချိုးအစား လှပပြီး အဖျားလုံးသော နှာတံ၊ ညို့ အားကောင်းလှသာ မျက်ဝန်း၊ ဆေးမဆိုးဘဲ သွေးရောင် လွှမ်းနေသာ စိုပြေနီထွေးသော နှုတ်ခမ်း၊ ထိုပင်ကိုယ်ရှိပြီး မျက်နှာလှလှပေါ်တွင် ကာမရာဂ အရောင်အသွေးတွေ ချယ်မှုန်းလိုက်သောအခါ ပို၍ တပ်မက်နှစ်သက်စရာ ဖြစ်သွားပါတော့သည်။ ကာမဆန္ဒတွေ ပြည့်ဝ၍ အားရ ကျေနပ်နေသော မျက်နှာအမူအရာကို တစိမ့်စိမ့်ကြည့်ရင်း ဂျစ်တူးတစ်ယောက် ကိလေသာရာဂမီးတွေ တငြီးငြီး တောက်လောင်လာပြန်၏။ ကိလေသာရာဂစိတ်တွေထလေ စောက်ခေါင်းထဲ မြုပ်ဝင်နေသော လီးတန်ကြီးက ကြွသထက်ကြွလေ ဖြစ်နေသည်။ မျက်စိအစုံမှိတ်၍ မှိန်းနေသည့်တိုင် စောက်ခေါင်းထဲက ထူးခြားမှု အခြေအနေကို မတင်ရီ အစအဆုံး သိနေပါသည်။ ဂျစ်တူးက အားနှင့်ညှစ်၍ လီးတန်ကြီးကို (၃)(၄)ခါ လောက် တင်းတင်းပြရာ မတင်ရီက မှေးစင်းထားသော မျက်လုံးအစုံကို အားယူဖွင့်ကြည့်ရင်း – “ဟွန့် .. လွန်လှပါလား မမ ချစ်လင်လေးရယ် “ ဤသို့ မပငွ့်တပွင့် ဆို၏။
“ချစ်တာကိုး မမရဲ့“
“အံမယ် .. ဘာချစ်တာလဲ .. လီးနဲ့ထိုးပြီး လိုးတာကိုများ ချစ်တယ်လို့ ခေါ်သတဲ့လား .. ဟင်း .. ဟင့် “ မတင်ရီက ခပ်ထေ့ထေ့ ခပ်ငေါ့ငေါ့ ပြောသည်။
“ဒါပေါ့ … မမရ .. မညားခင် ရည်းစားစကားပြော .. လက်ကလေးကိုင် .. ကိုယ်လုံးလေးဖက် .. ပါးကလေးနမ်း .. ညားပြီးတော့ လိုးကြတာပဲ မဟုတ်လား .. တစ်ချို့ ဆို ညားတောင် မညားသေးဘူး .. ဗိုက်ပေါ်နေပြီ .. အဲဒီတော့ .. ချစ်တယ်ဆိုတာ .. တကယ်တော့ ဒါလုပ်ကြချင်လို့ မဟုတ်လား .. “
“အဟင်း… ဟင်း “
ဂျစ်တူးက ပါးစပ်နှင့် ပြောရုံတင်မကဘဲ သူ့လီးကြီးနှင့် လေးငါးဆယ်ချက်ခန့် ဆောင့်ပြသည်။
“ဖွတ် .. ဖွတ် .. ဖွတ် .. ဖွစ် .. ဖွတ် .. ဖွတ် “
“အင့် … အား .. အင့် .. အား … အင့် … အင့် .. “
“အို … အင်း … အို …. အို .. နေ .. နေပါအုံးဟဲ့ …မမ ခြေထောက်က တန်းလန်းကြီး ဖြစ်နေတယ် .. မင်းပေါင်ကြီးနဲ့ ဖိထားတော့ နာလိုက်တာ .. ကျွတ် .. ကျွတ် .. ဆိုးကို ဆိုးလွန်းတယ် .. မင်းလီးကြီး ခဏနှုတ်လိုက်အုံး .. တကယ်ထဲ .. “
“ဒီလူဆိုးလေး အချစ်ကို ခံချင်လို့ မမ ဒီဘက် ရောက်လာတာ မဟုတ်လား … “ ဂျစ်တူးက ထိုသို့ပြောရင်း သူ့လီးကြီးကို ဆွနှဲုတ်လိုက်သည်။ လီးတန်ကြီးက စောက်ဖုတ်ထဲက ကျွတ်ထွက်လာပြီး အထက်သို့ မတ်၍ တဆတ်ဆတ်တောင်နေသည်။ စောက်ဖုတ်ထဲ ကိန်းအောင်းထားပြီး မို့လားမသိ လီးတန်ကြီး တစ်ဝိုက်တွင် ယှက်သမ်းနေသော သွေးကြောကြီးတွေမှာ ယခင်ကထက် သိသိသာသာ ဖောင်းကြွနေသည်။
အရေပြားက ဒစ်တစ်ဆုံးထိ လန်နေပြီး ဒစ်ဆီဖူးကြီးမှာ နီညိုရောင်သန်းပြီး စောက်ရေတို့ဖြင့် စိုရကွှဲာ ဝင်းပြောင်တင်းကားနေ၏။ ဂျစ်တူးတစ်ယောက် သူ့လီးကြီးကို ကြည့်၍ အလွန်အားရ ကျေနပ်နေသည်။ မတင်ရီလို တဏှာရာဂအားကြီး ပြင်းထန်လှသော မိန်းမတစ်ယောက်ကို ယိုင်လဲသွားအောင် ဖြိုနိုင်သည့်လီးဖြစ်၍ ပေါ့သေးသေး မဟုတ်ကြောင်း တွေးမိကာ သူ့မျက်နှာမှာ ပြုံးရိပ်သန်းသွားသည်။
“အော် .. မမခြေထောက်ကို ခုတင်ပေါ် တင်ပေးအုံးလေး .. ကျစ် .. တကထဲ “ တကယ်ပင် နွမ်းလျနေပြီ ဖြစ်၍ မတင်ရီက စိတ်မရှည်စွာ ပြောလိုက်သည်။
“အော် .. အော် … ဆောရီး .. ဆောရီး .. “ ဂျစ်တူးက ခုတင်အောက်တွင် တွေဲ လာင်းကျနေသော မတင်ရီ ခြေထောက်နှစ်ချောင်းကို မ, ပြီး တင်ပေးလိုက်သည်။ မတင်ရီကလည်း ရှိသမျှ အားနှင့် သူ့ကိုယ်ကို ရှေ့ သို့ကော့ထိုးလိုက်သည်။
စောက်ဖုတ်ဖောင်းဖောင်းကြီးက သူ့လီးဒဏ်ကြောင့် ခပ်ဟဟလေး ဖြစ်နေသည်။ စောက်ရေတွေကလည်း ဖင်ကြားထိအောင် စီးကျနေသည်။ စောက်ဖုတ်အကွေဲ ကြာင်း ထိပ်ရှိ စောက်စိကြီးမှာ အညိုရောင်သန်း၍ ငေါက်တောက်ကြီး ပြူးထွက်နေသည်။
စောက်ဖုတ်ကြီးကို ကြည့်ရင်း ဂျစ်တူးလီးတံကြီးမှာ ပို၍ပို၍ တင်းတောင့်တောင် မတ်လာသည်။ ဂျစ်တူးက ပက်လက်ဖြစ်နေသော မတင်ရီကို တစ်စောင်းဖြစ်အောင် ပြင်ပေးလိုက်သည်။ မတင်ရီတစ်ယောက် ဂျစ်တူးကို မျက်စောင်းတစ်ချက် ထိုးကြည့်ရုံမှအပ ဘာမှ မပြောနိုင်တော့ပါ။ ပြောလည်း မပြောချင်။ ဒီမီးက သူမ မွှေးခဲ့တဲ့ မီးမဟုတ်ပါလား။ ပြီးတော့ ဒီမီးအလောင်ခံချင်သူကလည်း သူမပင်။ ထို့ကြောင့် မှောက်လိုမှောက်၊ လှန်လိုလှန်၊ ဂျစ်တူး ပြုသမျှ အသာပင် ငြိမ်ခံနေလိုက်သည်။ တစ်စောင်းကွေးထားလိုက်သောအခါ ၀ိုက်ကားမို့မောက်သော တင်ဆုံဝင်းဝင်းဖွေးဖွေးကြီးက ခုံးခုံးကြီး ကြွတက်လာသည်။
ဂျစ်တူးက သူဖတ်ဖူးထားသည့် အပြာစာအုပ်ထဲကအတိုင်း ပုဇန်ွတုတ်ကွေးလိုးနည်းဖြင့် လိုးရန် ရည်ရွယ်၍ ယခုကဲ့သို့ မတင်ရီကို တစ်စောင်းအနေအထားဖြစ်အောင် ပြုပြင်ပေးလိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ဖင်အိုး ဝင်းဝင်းအိအိကြီးနှစ်မွှာ က အက်ကွေဲ နသည်။ ဂျစ်တူးက မတင်ရီဖင်ဝနငှ့် သူ့လီးအံကျဖြစ်အောင် ဖင်ဆုံကြီးကို ပွေ့ယူလိုက်သည်။ သည်တော့ ဖင်ဆုံထွားထွားအိအိကြီးက ခုတင်စောင်းကို အနည်းငယ်စွန်း၍ ထွက်လာသည်။
စောက်ဖုတ်ဖောင်းဖောင်းကြီးက ပေါင်နှစ်လုံးကြားတွင် ညှပ်ကာ နောက်သို့ခုံးခုံးကြီး
ပြူးတစ်ထွက်လာသည်။ ဂျစ်တူးက သူ့ဒစ်ဆံပြဲကြီးဖြင့် စောက်ဖုတ်နှုတ်ခမ်းသားကြီး နှစ်လွှာကို ထိုးခွလဲိုက်ပြီး စောက်ခေါင်းအပေါက်ထဲ မသွင်းသေးဘဲ ထယ်ထိုးသလို လျှောတိုက်ပေး၏။ ဒစ်ဆံကြီးနှင့် စောက်စိအငုတ်ကြီးတို့ မကြာမကြာ ပွတ်တိုက်မိရာ မတင်ရီ တစ်ကိုယ်လုံး တွန့်ကနဲ တွန့်ကနဲ လူးခါသွားသည်။ ဤကဲ့သို့ အားရကျေနပ်အောင် ဆော့ဆွကစားပြီးမှ စောက်ဖုတ်အကွလဲမ်းကြောင်းအတိုင်း
လျှောဆင်းလာပြီး အရှိန်နှင့် ဖိသွင်းလိုက်သည်။ စောက်ဖုတ်ကြီး တစ်ခုလုံး ရွအာပွထနေသည့်တိုင်၊
ပေါင်တံတုတ်တုတ်ကြီး နှစ်ချောင်းနှင့် ဖိညှပ်ထားသည်က တစ်ကြောင်း၊ အရှိန်အားနှင့် တိုးဝင်လာသည်ဖြစ်၍ တစ်ကြောင်း ပူကနဲ နင့်ကနဲ ခံလိုက်ရသည်။ “အား … အား … ရီှး … ကျွတ် … ကျွတ် …. ရီှး .. အမေ့ .. “ မတင်ရီ နှုတ်ဖျားက ညီးသံသဲ့သဲ့ ထွက်သွား၏။ လီးကြီးအဆုံးထိ နစ်ဝင်သွားသောအခါ မတင်ရီ ဒူးကောက်ကွေးကြားတွင် ဘယ်လက်ကိုထောက် ကျောပြင်ဘေးတစ်ဖက်တွင် ညာလက်ကို ထောက်ကာ အသွင်းအနှုတ် စတင်ပြုလုပ်ပါတော့သည်။
“ဖွစ် .. ဖွစ် … ဖွတ် .. ဖွိ .. .ဖွိ … ဖွစ် .. “ “ဖွစ် … ဖွစ် … ဖွတ် … ဖွိ .. ဖွိ … ဖွစ် … “ လီးတံကြီး ဆွအဲနှုတ်တွင် စောက်ဖုတ်အုံကြီးက စူကြွလာပြီး၊ လီးတံကြီး နှစ်သွင်းလိုက်သောအခါ ရှုံ့ ချိုင့်နစ်ဝင်သွား၏။
“ဖွိ … ဖွိ … ဖွစ် … ဖွတ် … ဖွတ် … ဖွိ .. “
“ဖွိ … ဖွိ … ဖွစ် .. ဖွတ် … ဖွတ် … ဖွိ .. “
တစ .. တစ အောင့်အားတွေက ပြင်းထန်လာသည်။ မတင်ရီ တစ်ကိုယ်လုံး တသိမ့်သိမ့် လှုပ်ခါနေသည်။
(၇) လက်မခွဲခန့်ရှည်သော လီးဖြစ်၍ အသွင်းအနှုတ် ပြုလုပ်ရသည်မှာ ဆို့ဆို့ပု့ပို့ ထိထိမိမိ စီးစီးပိုင်ပိုင် ရှိလှသည်။ ဂျစ်တူးက ဖင်ကြောကြီးတွေ ရှုံ့ ခွက်သည်အထိ အသားကုန် ကြုံးကြုံးဆောင့်သည်။ ကာယအားရော အတွင်းအားပါ ကောင်းလှသူမို့ ဆောင့်ချက်တွေက ထိမိ၏။ အချက်တစ်ရာခန့် ခပ်ပြင်းပြင်း ဆောင့်ပြီးနောက် အားစိုက်လွန်းလျှင် ပ၍ို ပင်ပန်းကြောင်း စောစောကပင် သင်ခန်းစာ ရထား၏။ သည်တော့ ခပ်မှန်မှန်လေး ဇိမ်နှင့် ဆောင့်ပေးပြန်သည်။ မတင်ရီခမျာမှာလည်း မဆိုစလောက် နာကျင်ရုံမှအပ အလွန့်အလွန် ကောင်းလွန်းလှသော ကာမအရသာကြီးကို တမြှင်းမြှင်း ဇိမ်နှင့် ခံစားနေရ၏။
နူးညံ့သော စောက်ဖုတ်အတွင်းသား၊ နုထွားသန်မာလှသော လီးတန်၊ သဘာဝအလျောက် တစိမ့်စိမ့်ထွက်နေသော စောက်ရည်ကြည်များက နှစ်ဦးနှစ်ဝလုံး၏ (မေထုန်သံခါသ) ကာမစပ်ယှက်ခြင်းအလုပ်ကို ကျက်သရေ မဂင်္လာ ရှိလှစွာ အထောက်အကူပြုနေပါတော့သည်။ ကာမဘုံသားများအဖို့ ရွှေငေရွ တနာ စည်းစိမ်ဥစ္စာ ရာထူးအာဏာတွေ အဘယ်မျှ ပြည့်စုံကြွယ်ဝပါစေ ကာမသုခခေါ် ကာမဂုဏ် ဟာတာတာ ဖြစ်လျှင် ဘဝအနာကြီး နာလျှက် လူဖြစ်ကျိုးမနပ် ဖြစ်ရတတ်သည်။ စည်းစိမ်ဥစ္စာ ရတနာရွှေငွေေ တွ ပြည့်စုံပေါများခြင်းကြောင့် မာနဘဝင် တက်ကြွခွင့်သာရှိပြီး၊ ဟဒယဘဝင် ရွှင်မြူးလျှက် အချစ်ရမ္မက်၏ ထူးခြားသော အမြိုက်အရသာကိုမူ ခံစားခွင့် ရမည်မဟုတ်ပေ။ ကာမဆန္ဒတွေ မပြည့်ဝ၍ နှလုံးသားထဲ ဒေါမနဿမီးတွေသာ လောင်မြိုက်ခံနေရသည်ဖြစ်ရာ
လောကငရဲတစ်မျိုးပင် ဖြစ်တော့၏။ သူတော်ကောင်းတို့အမြင်မှာ ကာမကိစ္စသည် ညစ်ညမ်းစုတ်ပဲ့သော လုပ်ရပ်ဖြစ်သည်ကား မနှ ၏် ။ သို့သော် ထိုသူတော်ကောင်းတို့သည် ကာမ၏ အပြစ်နှင့် ညစ်ညမ်းမှုတို့ကို ဘဝပေါင်းများစွာ အလေ့အလာပြုပြီးမှ
သိကြားခြင်း ဖြစ်သည်။ ထိုသို့ ကာမ၏ အပြစ်နှင့် ညစ်ညမ်းမှုကို စေ့စေ့ငှငှ သိမြင် ပယ်ခွာနိုင်သော ပုဂိုလ်အရေအတွက်မှာလည်း သတ္တဝါ အသချေ င်္အနန္တထဲမှ တစ်ဦးတစ်လေမျှသာ ဖြစ်သည်။ ကာမ၏ နယ်ပယ်သတ္တိမှာ ဤမျှအထိ ကျယ်ဝန်းနက်ရှိုင်းလှ၏။ သတ္တဝါ၏ မူလဗီဇဓါတ်ကိုက အသိဉာဏ်ကင်းမဲ့မှုနှင့် တွယ်တာတပ်မက်မှုတို့ ဖြစ်ကြသည်။ ထိုသဘာဝတိ်ု့သည် စိတ်၏အနက် စိတ်၏အမြုတေပင် ဖြစ်တော့သည်။ ယခု .. ကာမဘုံသား မနုဿသားကောင်များ ဖြစ်ကြသည့် မတင်ရီနှင့် ဂျစ်တူးတို့မှာ စိတ်ရှိတိုင်း ကာမအရသာကို ခံစားခွင့်ရနေကြသည်ဖြစ်ရာ လူ့ဘဝကို အရသာထူးသူများဟု ကာမတဏှာ နယ်ပယ်ဖက်မှ ခေါ်ဆိုလိုက ခေါ်ဆိုနိုင်သည်။ တိ်ုးတက်သော ကမ္ဘာကြီးတွင် ဆင့်ပွားတိုးတက်လာသော ဝေါဟာရ ပညတ်တွေကြောင့် ထူးဆန်းသော ဘဝပြသနာတွေ တိုးပွားလာရသည်။ ပညတ်မာယာကွန်ယက်သည် မနုဿလူသားတွေကို
သောကပရိဒေဝ ဒုက္ခ ဒေါမနဿမီးတွေ တောက်လောင်စေခ့၏ဲ ။ တဏှာရာဂ အရင်းခံသော အချစ်သည်လည်း ဒုက္ခမီးကို တောက်လောင်စေသည်ကား မနှ ၏် ။ ထိုဒုက္ခမီးသည်ပင် ကာမသတ္တဝါ မနုဿပိုးဖလံတို့အတွက် ရွှေရောင်ဖန်ဆင်းထားသော မာယာထောင်ချောက်ကြီး ဖြစ်နေပါသည်။
ကာမညွှတ်ကွင်းက လွတ်ကင်းအောင် ရုန်းမထွက်နိုင်သေးသမျှ ထိုမာယာ ထောင်ချောက်ကြီးသည်ပင် မနုဿသားကောင်တို့အတွက် အလွန်ပျော်မွှေ့နှစ်ခြိုက်စရာ ကောင်းသော အသိုက်အမြုံကြီး
ဖြစ်နေပါတော့သည်။ အဓိက ဆိုလိုသည်မှာ ဖမိုတို့၏ ပင်မအရင်းခံ အချစ်ဓါတ်၊ ကာမဓါတ်ချို့ တဲ့လျှင် လောကီအမြင်၊ လောကီရေးရာ လောကီရှုဒေါင့်ဘက်က လူဖြစ်ရှုံးသည်ဟု တည့်တည့်ကြီး ဆိုလိုက်ချင်ပါတော့သည်။ ယခုလူဖြစ်ရကျိုး နပ်သူနှစ်ဦးတွင် တစ်ဦးက ခုတင်ပေါ်မှာ ကန့်လန့်ဖြတ် တစောင်းအနေအထားဖြင့်
ကာမအရသာထူးကို မေ့မေ့မူးမူး ခံစားရယူနေသလို၊ တစ်ဦးက မတ်တပ်ရပ်လျှက်
ဖြေးဖြေးမှန်မှန်ဆောင့်ကာ ကာမအရသာထူးကို ခံစားရယူနေ၏။ အချစ်လွန် ကာမကိစ္စတွင် ချိန်ခင်ွလျှာညီမျှသော အပေးအယူကိစ္စတစ်ရပ် ကိန်းအောင်းနေသည်မှာ အလွန်ဆန်းကြယ်လှ၏။ ယခု မတင်ရီနှင့် ဂျစ်တူးတို့မှာ သူတပြန် ကိုယ်တပြန် အပေးအယူမျှနေကြသည်။ ဤကဲ့သို့ ဆန့်ကျင်ဘက် ဖိုမတစ်စုံ၏ ကာမအပေးအယူမျှတခြင်းကို မေထုန်သံဝါသပြုခြင်း (၀ါ) ကာမစပ်ယှက်ခြင်းဟု ခေါ်သည်။ မတင်ရီတစ်ယောက် ကာမစည်းစိမ်ထူးကြီးကို မြိန်မြိန်ယှက်ယှက်ကြီး ခံစားနေရာမှ သူမ၏ ဆူဖြိုးနုညက်သော ကိုယ်အထက်ပိုင်းကို ပက်လက်လှန်လိုက်သည်။ တင်ဆုံအောက်ပိုင်းကိုမူ စောစောက တစောင်းအနေအထားအတိုင်းပင် ထား၏။ ကိုယ်အထက်ပိုင်းနှင့်
အောက်ပိုင်းကို လိမ်ဖယ်ရွဲ့ စောင်းသလို ဖြစ်သွားသည့်အတွက် အထက်ပိုင်းရှိ ပေါင်တံတစ်ချောင်းက မပြောပလောက်ရုံ အနည်းငယ်ဟသွားသည်။ မတင်ရီ လက်နှစ်ဖက်ကလည်း ဘေးသို့ကားထွက်သွား၏။ နှုတ်ဖြင့် ဖွင့်မပြောသော်လည်း မတင်ရီ၏ ကာယဝိညတ်အမူအယာက နို့ကို ကိုင်စေချင်သည့်အတွက် ပြသလာသော အမူအယာဖြစ်ကြောင်း ဂျစ်တူး အလိုလို သိလိုက်သည်။ ထို့ကြောင့် .. ထောက်ထားသော လက်နှစ်ဖက်ကို တင်းအိမို့မောက်နေသော နို့အုံဖွေး ဖွေး
နုနုကြီးနှစ်မွှာပေါ်သို့ ပြောင်းတင်လိုက်သည်။ ညီမျှသော အဆီအသားတို့နငှ့် ပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းထားသော
နို့ကြီးနှစ်လုံးက ဆူဖြိုးနုရွနေသည်။ ဂျစ်တူးက လက်ညိုးနှင့် လက်မကို ၀ိုက်ကားပြီး နို့အုံကြီး၏ အရင်းမှကိုင်၍ အထက်သို့ ပင့်တွန်းကာ အားရပါးရ ဆုတ်ချေပွတ်သပ်ပေးရင်း လက်နှင့် ညှစ်ညှစ်ကြည့်သည်။ ထိုအခါ .. နို့ကြီးနှစ်လုံးမှာ
ဝင်းအိတင်းပြောင်လာပြီး နို့သီးခေါင်းခေါင်းညိုညိုလေးက ထောင်မတ်လာသည်။ မှန်မှန်ကြီး ဆောင့်ဆောင့်လိုးနေလျှက်ကပင် ကိုယ်ကိုကိုင်း၍ ငုံ့စို့ပြစ်လိုက်သည်။
“ပြွတ် … ပြွတ် … ပြွတ် … ပြွတ် .. ပြွတ် .. “
စို့လည်းစို့၊ လျှာဖြားဖြင့်လည်း မွှေဆွပေးလိုက်ရာ ယားကြွတုန်ခါသော ကာမဓါတ်လှိုင်းကြီးတစ်ခု မတင်ရီ တစ်ကိုယ်လုံး ဖုံးလွှမ်းသွားသည်။ ထိုကာမလျှပ်စစ်လှိုင်းကြီးသည် ကာမဗဟိုအကြောများ စုဝေးပေါင်းဆုံရာ စောက်ဖုတ်အုံကြီးဆီသို့ ဂိတ်ဆုံးအပြီးသတ် ရပ်နားသွားသည်။ ထိုအခါ … စောက်ဖုတ်လှိုဏ်ခေါင်းတစ်ခုလုံး လှုပ်ခတ်တုန်ခါသွားပြန်၏။ ထိုတုန်ခါမှု လှိုင်းဂယက်က တစ်ကိုယ်လုံးရှိ ရမ္မက်သွေးတွေကို ဆူပွက်နိုးထစေပြန်၏။ ဂျစ်တူးက အဆက်မပြတ် ဒလစပ် ဆုတ်ချေ စို့ပေးနေရာ ကာမရာဂ လှိုင်းဂယက်တွေလည်း ဒလစပ် ပွက်ထနေတော့၏။
ကာမပင်လယ်ပြင်တွင် ကိလေသာ ရမ္မက်မုန်တိုင်းတို့ အဟုန်ပြင်းစွာ တိုက်ခတ်ပေတော့မည်။ သို့ဖြစ်ရကား .. မတင်ရီ၏ ဇီဝဓါတ်အစုအဝေး ရပ်ုခန္ဓာတည်းဟူသော ဝတ္ထုကာမနှင့် တဏှာရာဂတည်းဟူသော ကိလေသာမဓါတ်မှ ဇောတည်းဟူသော ရဲရင့်တက်ကြွမှု၊ အငမ်းမရမှုတွေ ပွင့်ကန်လာတော့သည်။ ထိုမှတဆင့် ..
တဏှာရာဂမာန်တွေ ပြင်းပြထက်သန်လာတော့၏။ ထိုအခါ .. ခပ်မှန်မှန်လေး
ဆောင့်ဆောင့်လိုးပေးနေသည်ကိုပင် အားရကျေနပ်ခြင်း မရှိတော့ .. အားမလိုအားမရ ရိုးတိုးရွတကြီး
ဖြစ်လာသည်။ ထို့ကြောင့် … သူမ ဖင်ဆုံကြီးကို အားရပါးရ ကော့၍ ကော့၍ ခံလာသည်။ စောက်ဖုတ်ကြီးကို ညှစ်၍ ညှစ်၍ တင်းခံသည်။ မတင်ရီ၏ ရမ္မက်ဇောကြွသည့် ဆန္ဒရာဂကို ဂျစ်တူး သဘောပေါက်သွား၏။ သည်တော့ နို့ကြီးနှစ်လုံးကို အခြေမှ တင်းတင်းရင်းရင်း ထိထိမိမိကြီး ဆုတ်ကိုင်လျှက် အသားကုန် ကျုံး၍ကျုံး၍ ဆောင့်တော့သည်။
“ဖွတ် … ဖပ် … ဖွတ် … ဖပ် … ဖွတ် … ဖပ် … ဖွတ် … ဖပ် “
“အီ … အင့် … အား … အ … ရှီး … အီ … အင့် … အား … အ … ရီှး … “
စောက်ဖုတ်နှင့် လီးတွေ့ထိသံ၊ ရမ္မက်လွှမ်းသော ညီးညူသံ၊ ခုတင်လှုပ်သံ၊ ပြင်းထန်သော အသက်ရှူသံတို့ဖြင့် တစ်ခန်းလုံး ဗြောင်းဆန် ပွက်ညံနေပါတော့သည်။ ဂျစ်တူးက ယောက်ျားတို့၏ စွမ်းရည် သတ္တိကို အစွမ်းကုန် ပြသသည့်အနေဖြင့် မီးကုန်ယမ်းကုန် ကျုံးကျုံးပြီး တအားဆောင့်လိုးနေသလို ..
မတင်ရီကလည်း မိန်းမတို့၏ ဂုဏ်ရည်ကို ပီပီသသ ပြချင်လွန်းလှသဖြင့် ကော့၍ တစ်မျိုး၊ ဆောင့်၍ တစ်ဖုံ ၀ိုက်ညှစ်၍ တစ်နည်း မငြီးရအောင် ခံနေပါသည်။
“ဖွတ် … ဖွတ် .. ဖတ် … ဖွတ် .. ဖွတ် … ဖွတ် … ဖွတ် .. ဖတ် … ဖွတ် .. ဖွတ် … “
“အင့် … အ … အား … အမေ့ …. အင့် … ကျွတ် … အင့် … အ … အား … အမေ့ …. အင့် … ကျွတ် … “ ဆောင့်ချက်ပေါင်း တစ်ရာကျော်သောအခါ နှစ်ဦးစလုံး ဘယ်လိုမှ ထိန်းချုပ်နိုင်စမွ်း မရှိကြတော့ဘဲ သုတ်ရည်ပူတွေ ပြိုင်တူ ပန်းထွက်ကုန်တော့သည်။
ခေါင်းမော့၊ ခါးမတ်ပြီး လည်ပင်းကြောကြီးတွေ ထောင်ထလာသည်အထိ သုတ်ရေတွေကို ညှစ်ထုတ်ပြီးသောအခါ ဂျစ်တူးကိုယ်လုံးကြီးက မတင်ရီကိုယ်ပေါ် မှောက်ကျသွားတော့သည်။ မိနစ်ပေါင်းများစွာ ကြာသည်အထိ မှိန်းနေလိုက်၏။ မှိန်းလို့အားရပြီးနောက် ဂျစ်တူးနာရီကြည့်လိုက်သောအခါ (၃)နာရီ (၄၅)မနိ စ် ရြှိပ။ီ မခွာ ချင် ခွာချင်ဖြင့် မတင်ရီကိုယ်ပေါ်မှ ခွာလိုက်ပြီး နွေးထွေးစိုစတ်ွသော စောက်ဖုတ်အခေါင်းအတွင်းဝယ် ငြိမ်သက်စွာ ကိန်းအောင်းနေသော သူ့လီးတန်ကြီးကို ဆွနှဲုတ်လိုက်သည်။
“ဗွတ် … ဗွပ် … ဗွပ် … ဘွတ် … ဘူ …. ဗွတ် “
လေသံတွေနှင့် ရောနှော၍ လီးတန်ကြီးက ကျွတ်ထွက်လာသည်။ သည်တစ်ချီတွင် သူ့လီးကြီးမှာ မာန်ကျသွားပုံရသည်။ မတင်ရီ၏ စောက်ဖုတ်ကြီးကို အလေးပြု ဦးညွှတ်သည့် အလား ပေါင်ကြားထဲတွင် တန်းလန်းကြီး ငိုက်ဆင်းနေသည်။ အခုတော့ တက်ကြွဇောထန်သော ရမ္မက်စိတ်တွေလည်း ငြိမ်သက်သွားသည်။ စိတ်တိုင်းကျ ထင်သလို စားသောက်ပြီးနောက် ဝအီသွားသည့်အလား၊ စိတ်တွင်းက
အေးဆေးတည်ငြိမ်သွားသည်။ တစ်ကျော့ပြန် ကျော့လျှင် တော်တော်လေး အရှိန်ယူရမည် ဖြစ်သည်။ တစ်ကျော့ပြန်လိုသော စိတ်လည်း တဒင်္ဂကင်းဆိတ်သွားပုံရသည်။ ဂျစ်တူးက မတင်ရီ၏ တစောင်းကွေးထားသော ဖင်အုံကြီးဘေးတွင် ခြေတွေဲ လာင်းချရင်း ထိုင်နေသည်။ တစ်ကိုယ်လုံး လေးလံထိုင်းမှိုင်းသွားသည်။ စောစောပိုင်းက အငမ်းမရ တပ်မက်ခဲ့သော ဖင်ဆုံကြီးကိုပင် ကြည့်လို ကိုင်လိုစိတ် ပါးလှပ်သွား၏။ မတင်ရီခမျာလည်း အတော်လေး အခြေအနေဆိုးသွားသည်။ ထရမှာကိုပင် အားပြတ်သလို ဖြစ်နေ၏။ ဒီအတိုင်းသာ ခြေပြစ်လက်ပြစ် နေလိုက်ချငတော့သည်။ သို့သော် .. ဂျစ်တူးက သူမရဲ့ တရားဝင် လင်ယောက်ျားမဟုတ်။ ထိုအတွေးအသိက မတင်ရီစိတ်ထဲ ဝင်ရောက်လာသည်။
စောစောက ဘာကိုမှ မတွေးမိ၊ ပြင်းထန်သော ရာဂရမ္မက်ဇောက မောဟစောင်ကို ခြုံလျှက် လူ့အသိတရား၊ လူ့ကျင့်ဝတ်တရားများကို အမှောင်ချ ဖုံးလွှမ်းထား၏။ တဏှာရာဂသည် သူ့အလိုလို
ပြည့်ဝသွားသဖြင့် တဒင်္ဂငုတ်လျှိုးပျောက်ကွယ်သွားသည်။ အခုလို .. စိတ်အလိုဆန္ဒ ပြည့်ဝကျေနပ်ပြီးကာမှ ပကတိအခြေအနေကို သဘောပေါက် နားလည်လာတော့၏။ တစ်စောင်းအနေအထား ဖြစ်နေသော သူမအောက်ပိုင်းကို ပက်လက်လှန်လိုက်သည်။ လူတစ်ကိုယ်လုံး ရိုက်ချိုးခံထားရသလို ဖြစ်ပြီး အလွန်ပင်ပန်း နွမ်းနယ်နေသည့်အတွက် မတင်ရီနှုတ်ဖျားက ငြီးသံသဲ့သဲ့ ထွက်သွား၏။
“အင်း … အင့် … အင်း …. ကျွတ် … ကျွတ် … “ သည်တော့မှ ဂျစ်တူးတစ်ယောက် နောက်သို့ လှည့်ကြည့်မိတော့သည်။ သူ့မျက်လုံးတွေက စောစောကလို အရောင်မလက်တော့။ သာမာန်အရာဝတ္ထုတစ်ခုကို သာမန်ကြည့်ရုံမျှသာ ဖြစ်တော့၏။ မတင်ရီက လက်တစ်ဖက်ကို မြှောက်၍ ပွေ့ထူပေးရန် ဟန်အမူအယာပြတော့မှ သူမလက်ကိုဆွ၍ဲ ပခုံးမှ ပွေ့မထူပေးလိုက်၏။ နွမ်းလျှသောအကြည့် မျက်ဝန်းတို့ဖြင့် မတင်ရီက ဂျစ်တူးကို ကြည့်၏။ ပြီးတော့ ..
“ကဲ … ကျမရဲ့ လူစွမ်းကောင်း လင်တော်မောင်လေး .. ကျေနပ်ပလား ဟင် .. “ ဤသို့ ပြောရင်း ဂျစ်တူးလည်ပင်းကို သိုင်းဖက်ကာ နမ်းလိုက်သည်။ ပူလောင်သော အနမ်းမဟုတ်သည်ကို ဂျစ်တူး ခစာံး သိရှိလိုက်သည်။
“လင်” ဆိုသော စကားကို စောစောက သာယာကျေနပ်မိသလောက် အခုတော့ ဂျစ်တူး လန့်ဖျတ်သွားသည်။ သူ့အဖြစ်က မတင်ရီ၏ လင်ငယ်ဘဝသို့ ရောက်ရှိသွား၏။ မတင်ရီ၏ လင်ငယ်မှာ ဂျစ်တူး ဖြစ်သွားသည်။ မတင်ရီနှင့် ဂျစ်တူးတို့မှာ မတင်ရီ ယောက်ျားမရှိခိုက် ကြာကူလီ မျောက်ဇာတ်ခင်း၏။ နောက်မီးလင်း ၂ပါးသွား ကပြကြ၏။ ကြိုက်ကုန်းပြဇာတ် ခင်းကြသည်။ ဂျစ်တူးတစ်ယောက် ကြာကူလီ မယားခိုးဘဝသို့ ရောက်ရှိသွားသော် သူ့အဖြစ်ကိုတွေးမိကာ ခေါင်းနပန်းတွေ ကြီးထွက်သွားသည်။
“မမကတော့ ဟောဒီမောင်လေးကို အရမ်းချစ် အရမ်းစွသွဲားပြီကွာ .. နောက်လဲ အခုလို အားရပါးရ လိုးပေးနော် .. နော်လို့ .. “
မတင်ရီက ပါးစပ်ကလည်းပြော၊ လက်ကလည်းအောက်သို့ မာန်ကျ ငိုက်ဆင်းနေသော လီးတန်ကြီးကို ခပ်ဖဖွလေး တယုတယ ဆုပ်ပေးနေသည်။ မတင်ရီ၏ အဆွဓဲါတ်အား ကောင်းလှသော သဒ္ဒါရုံနှင့် နူးညံ့သော လက်ဖဝါးအတွေ့က ဝင်ရောက်လာသော ကြောက်စိတ်အတွေးတွေကို မောင်းထုတ်ပစ်လိုက်၏။ အမှန်အားဖြင့် ကာယရုပ်နမွ်း၍ စိတ်လည်း နွမ်းလျ ကျုံ့ ငယ်သွားခြင်းသား ဖြစ်သည်။ အရိယာသူတော်စင် မဟုတ်သမျှ ကိလေသာ ကာမစိတ်ကို အနိုင်ယူ လွှမ်းမိုးနိုင်သော စိတ်ဓါတ်သတ္တိမျိုး အလွန်ရှားသည်။ ဂျစ်တူးက မတင်ရီခါးကို သိုင်းဖက်ထားရင်း –
“မမ တော်တော် ပင်ပန်းသွားလားဟင် “
“မောင်လေးရော .. “ မတင်ရီက ဂျစ်တူးအမေးကို မဖြေဘဲ ပြန်မေးလိုက်၏။
ဂျစ်တူးက အထွေအထူး မဖြေဘဲ “အင်း” တစ်လုံးသာ ဖြေလိုက်သည်။
“အတူတူ မောင်လေးရဲ့“ မတင်ရီ အိမ်ထောင်သက် တစ်လျှောက်လုံးမှာ တစ်ခါမှ ဒီလိုအကောင်းကြီး ကောင်းပြီး ဒီလောက် မပင်ပန်းခဲ့ဖူးပါ။
“မမ .. မလိမ်ပါဘူးကွယ် “
“ဟာ .. သတိရပြီ .. နေအုံးမမ “ “အမလေးဟဲ့ .. လန့်လိုက်တာ “ ဂျစ်တူးက အာမေဋိတ်သံကြီးဖြင့် ဝမ်းသာအားရ ပြောလိုက်သောအခါ ပင်ပန်းနွမ်းလျနေခိုက်မို့ မတင်ရီ တကယ်ပင် လန့်ဖြန့်သွားသည်။
“ဒီလို မမရ .. တစ်ည ဦးလေးနဲ့ ဒေါ်ဒေါ်တို့ လိုးနေကြတာကို ချောင်းကြည့်မိတယ် .. တော်တော်ကြာတာပဲ .. ဒေါ်ဒေါ်ဆိုရင် မမလိုပဲ မျော့နေတာပဲ .. အဲဒီတော့ .. ဦးလေးက သူ့ခေါင်းရင်း ကြွက်လျှောက်ပေါ်မှာ
တင်ထားတဲ့ ပုလင်းထဲက အရေတွေကို တစ်ခွက်စီ ငှဲ့ပြီး သောက်ကြတယ် .. ပြီးတော့ တစ်ချီပြန်ချကြတယ်လေ .. အမယ် .. ဒေါ်ဒေါ် အပေါ်ကတောင် တက်ပြီး ချပေးတာဗျ .. ဒါနဲ့ .. နောက်ရက်တွေကျ .. ကျွန်တော်လဲ အဲဒီပုလင်းကို ဖွင့်ပြီး နမ်းကြည့်တယ် .. တောအရက်နံ့ထွက်နေတယ် .. ဒါပေမယ့် အရောင်က အဖြူရောင် မဟုတ်ဘူး .. သွေးရောင် .. ပြီးတော့ ဘာကောင်ရဲ့လဥနဲ့ လီးတန်လဲ မသိဘူး .. အဲဒီ ပုလင်းထဲမှာ စိမ်ထားတာ .. အဲဒါ .. ကျွန်တော် သွားယူမယ် “ ဂျစ်တူးက ပြောပြောဆိုဆို ထိုင်နေရာမှ ဗြုန်းကနဲ ထလိုက်ပြီး၊ အပေါ်ထပ်တက်သွားသည်။ ဂျစ်တူးစကားကြောင့် မတင်ရီ ရင်ထိတ်သွား၏။ ဒီဆေးတွေတိုက်ပြီး တစ်ချီထပ်ချမယ်ဆိုရင် ဒုက္ခဟု တွေးလိုက်မိ၏။
နောက်တစ်ချီများ ထပ်ချမည်ဆိုလျှင် မတင်ရီတစ်ယောက် ကိုယ့်ခြေထောက်နှင့်ကိုယ် မပြန်နိုင်ဘဲ
ပွေ့ထုတ်ရမည့်ကိန်း ဖြစ်တော့သည်။ သို့သော် .. ဘာပြောပြော၊ လူတစ်ကိုယ်လုံး နုံးခွေနေပြီဖြစ်၍ ဂျစ်တူးပြောသည့် ဆေးကိုတော့ သောက်ချင်သည်။ အရက်သောက်လျှင် သွေးကြွ စိတ်ပျော်ကြောင်း မတင်ရီ သိထားသည်။ မကြာခင်မှာ ပင် ဂျစ်တူးတစ်ယောက် ဖန်ခက်ွနှစ်လုံးနှင့် ပုလင်းကိုင်၍ ရောက်လာသည်။ ဖန်ခက်ွအပြည့်နီးပါးထည့်၍ မတင်ရီကို သောက်ခိုင်းသည်။ ပြီးတော့ .. သူလည်း သောက်သည်။
တောအရက်နံ့သာမက လူပျံတော် သွေးဆေးနံ့နငှ့် အခြားအနံ့တစ်မျိုးပါ သင်းသင်းပျံ့ ပျံ့ လေး ထွကနေသည်။ ရင်ခေါင်းထဲ ပူဆင်းသွားပြီး တစ်ကိုယ်လုံး နွေး ထွေးရှိန်းမြသွားသည်။ လူလည်း သိသိသာသာ ပေါ့ပါး လန်းဆန်းသွားသည်။
ဆေးအရက်က သိသိသာသာပင် အစွမ်းပြလျှက် ရှိသည်။ တစ်ကိုယ်လုံး နွေး ထွေးလာရုံမျှမက ပါးပြင်တစ်ခုလုံး သွေးရောင်လွှမ်းသွားသည်။ “သောက်ဦးမလားဟင် … မမ “ မတင်ရီ သောက်လိုက်ချင်သေးသည်။ သို့သော် နှစ်ခကွ် အပြည့်ထည့်လိုက်သဖြင့် ပုလင်းက သိသိသာသာသာ ဟောက်ထွက်သွားသည်။ လျော့နေသော ပုလင်းကိုကြည့်၍ ဂျစ်တူး ပြသနာတက်မည်စိုးကာ –
“သောက်တော့ သောက်ချင်တယ် . ဒါပေမဲ့ မောင်လေး ဦးလေး ရိပ်မိသွားရင် ပြသနာတက်မှာစိုးလို့ “
“ဟာ .. ရတယ် .. ဒါက ခေါင်းရင်းက ပုလင်း မဟုတ်ဘူး .. ကျွန်းသေတ္တာကြီးထဲမှာ သိမ်းထားတဲ့ ပုလင်း .. အများကြီးပဲ .. ရာချီပြီးတော့ ရှိတာ .. ဒီပုလင်း လျော့တာလောက်ကို ဦးလေး မသိနိုင်ပါဘး မမရာ ..
ရော့ .. သောက် “ ဂျစ်တးက ဖန်ခက်ွထဲ လောင်းထည့်ပြန်သည်။ တစ်ဝက်လောက် ရောက်သောအခါ ..
“တော် .. တော်ပြီ မောင်လေး .. များရင် မူးကုန်လိမ့်မယ် .. အတိုင်းအဆနဲ့ပဲ ကောင်းတယ် .. မင်းလဲ ဒီလောက်ဆို တော်တော့ “ အခုတောင် ရစ်တစ်တစ်၊ ကြွတတ ဖြစ်လာပြီ ဖြစ်၍ အမူးလွန်လျှင် ပြသနာတွေ အကြီးအကျယ် တက်ကုန်ပေလိမ့်မည်။ အရက်နှင့် ရမ္မက်သည် ကမ္ဘာ့မဟာမိတ်ဖြစ်ကြောင်း အတွေ့အကြုံ နုနယ်သည့် ဂျစ်တူးထက် မတင်ရီက ပိုသိ၏။ ဂျစ်တူးက မတင်ရီ ပြသလောက်ပင် သူ့ခွက်ထဲ ထည့်လိုက်သည်။
နှစ်ယောက်သား ပြိုင်တူ မော့ချလိုက်ကြသည်။ ပြီးတော့ တစ်ယောက်မျက်နှာတစ်ယောက် ကြည့်ရင်း ပြုံးလိုက်ကြ၏။ နှစ်ယောက်စလုံး စိတ်တွေ မြူးကြွလာသည်။ စောစောက ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုတွေ ဘယ်ဆီများ ပျောက်ကွယ်ကုန်ပြီ မသိ။
နှစ်ယောက်လုံး၏ မျက်လုံးအစုံမှာ အချစ်ရည် အချစ်သွေးတို့ဖြင့် ပြည့်လျှမ်း စိုလက်လာ၏။ ဂျစ်တူးက မတင်ရီကို ပွေ့ဖက်ပြီး နှုတ်ခမ်းအစုံကို ပြင်းပြင်းရှရှ နမ်းစုပ်လိုက်သည်။ မတင်ရီကလည်း ဂျစ်တူးကို ပြန်ဖက်ထား၏။ ဂျစ်တူးလက်တွေက ပေါင်ကြားရှိ စောက်ဖုတ်ကြီးပေါ်သို့ ရောက်လာပြန်သည်။ ခပ်ဖဖွလေး ပွတ်ပေးနေစဉ် မတင်ရီ သတိဝင်လာပြီး ဂျစ်တူးလက်ကို ဆွဖဲ ယ်ကာ —
“တော် .. တော်အုံးကွ မောင်လေး .. မဆင်မခြင်လုပ်လွန်းရင် ပြသနာတွေ တက်ကုန်မယ် .. ဒီနေ့အဖို့ ဒီလောက်ဆို ကျေနပ်တော့နော် .. ပြီးတော့ အချိန်လဲ အတော်ကြာသွားပြီ .. မမ ထမင်းဟင်းတည် .. အဝတ်လျှော် ရေချိုးရအုံးမယ် .. သမီးလဲ သူ့အဒေါ်အိမ်က မကြာခင် ပြန်လာတော့မှာ လေးနာရီထိုးဖို့ ငါးမိနစ်ပဲ လိုတော့တယ် “ မတင်ရီ စကားတွေက အကျိုးအကြောင်း ဆီလျော်နေသဖြင့် ဂျစ်တူး ရှေ့ဆက်မတိုးတော့။ ဒီလောက် အားရအောင် လိုးပြီးမှတော့ ကျေနပ်သင့်ပြီဟု တွေးမိ၏။ ကြာကြာဝါးမည့်သွား အရိုးကြည့်ရှောင် ဆိုသည့် စကားပုံလည်း ရှိထားသည် မဟုတ်လား။ သို့တိုင် ဂျစ်တးက မတင်ရီကို ဖက်ထားဆဲတော့ ရှိနေသေး၏။ တစ်အောင့်နေမှ မတင်ရီကို မတ်တပ်ရပ်စေပြီး မျက်နှာချင်းဆိုင် ဖက်ထား၏။ ပြီးတော့ ပါးကိုဆွေဲ မာ့ကာ အထပ်ထပ် အခါခါ နမ်းသည်။ ပြီးတော့ — နီထွေးဖူးအာနေသော နှုတ်ခမ်းအစုံကို အကြာကြီး စုပ်သည်။ မတင်ရီ လက်နှစ်ဖက်ကလည်း ဂျစ်တူးခါးကို ပြန်ဖက်ထားသည်။
စောစောက ငိုက်ကနေသော လီးတန်ကြီးမှာ အရက်ရှိန်နှင့် ရမ္မက်အရှိန်ကြောင့် တဖန်နိုးကြွလာပြန်သည်။ တဖြည်းဖြည်း ထောင်မတ်လာပြန်သည်။ လီးတန်ကြီးက မတင်ရီပေါင်ကြားရှိ စောက်ဖုတ်ကြီးကို ထိုးကော်ပင့်ထောက်သလို ဖြစ်နေရာ မတင်ရီလည်း စိတ်တွေ နိုးကြွလာ၏။
“တော် …. တော်ပါအုံး .. မောင်လေးရယ်နော် … “ အက်ကွတဲုန်ယင်သော အသံဖြင့် မတင်ရီက ပြော၏။ သည်တော့မှ ဂျစ်တူးက ဖက်ထားသောလက်ကို
ရုတ်လိုက်ပြီး လူချင်းခွာလိုက်သည်။ မတင်ရီက ခုတင်ခြေရင်းရှိ ထမီနှင့် အင်္ကျီကို ကုန်းကောက်နေစဉ် —
“မမ .. ခဏ ခဏနော် “ ဂျစ်တူးက ကုန်းနေသော မတင်ရီကျောပြင်ကို လက်နှင့်ဖိထားရင်း ပြော၏။ မတင်ရီကလည်း ဂျစ်တူးပြောသည့်အတိုင်း နေလိုက်သည်။ ထိုလျှပ်တပြက် အခိုက်အတွင်းမှာပင် ဂျစ်တူးက
ထောင်မတ်နေသော သူ့လီးကြီးကို အသေအချာကိုင်၍ ဖောင်းအားပြူးတစ်နေသော စောက်ဖုတ်ကြီးထဲ နှစ်သွင်းလိုက်သည်။
“ဖွပ် … ဖွတ် … ဖွစ် … ဖွပ် … ဖပ် … ဖပ် “ “အိ … အိ … အင့် …. အင်း …. အင့် … အမေ့ “ အရှိန်နှင့် ဆောင်းသွင်းခြင်း ခံလိုက်ရသည့်အတွက် ကုန်းထားသော မတင်ရီခါးမှာ အနည်းငယ် ကော့မတ်သွား၏။ မကြာခင်မှာပင် ဂျစ်တူးက သူ့လီးတန်ကြီးကို ပြန်နှုတ်လိုက်သည်။
“ဖွစ် … ဖွစ် … ဖွတ် .. ဗြစ် …. ဗြစ် … ဖွတ် “ လီးကြီး ကျွတ်ထွက်သွားသည်နှင့် တပြိုင်နက် မတင်ရီ ရင်ဘတ်မှ ပင့်မပြီး ပြန်မတ်ပေးလိုက်သည်။
“အဟဲ … ဟဲ .. အဲဒါ .. အဆစ်ပေါ့ .. မမရာ “ ဆက်များ လိုးလေဦးမလားဟု တွေးပူနေရာမှ ဂျစ်တူးစကားကြောင့် အခုမှ ပြုံးနိုင်သွား၏။ ဂျစ်တူး၏ နောက်ပုံလေးကိုလည်း စိတ်ထဲက ချစ်မိသွားသည်။
“ဟွန်း .. တော်တော်ကိုကဲ နောက်ကျမှ မလိုးနိုင်ရင် ဟောဒီလိုကို ဆောင့်ချိုးပစ်လိုက်မယ် သိလား “ မတင်ရီက ဂျစ်တူးလီးတန်ကြီးကို ညာလက်နှင့် ဖမ်းဆုပ်၍ ဝက်အူရစ်သလို ညှပ်လိမ်လိုက်ပြီး ချိုးသည့်ပုံကို လုပ်ပြလိုက်၏။
“စိန်လိုက်လေ .. စိန်လိုက် “ ဂျစ်တူးကလည်း အညံ့မခံဘဲ မတင်ရီ၏ နို့ကြီးနှစ်လုံးကို ကိုင်ဆွေဲ ချမွကာ ပြောသည်။ “မမ .. အဝတ်အစား ဝတ်ပါရစေကွာ “ သည်တစ်ခါတော့ ဂျစ်တူး တကယ်လွှတ်ပေးလိုက်သည်။ မတင်ရီက ထမီကို တစ်ချက် ဖြန့်ခါပြီး ဝတ်လိုက်၏။ ထို့နောက် အင်္ကျီဝတ်သည်။ သပ်သပ်ရပ်ရပ်ဖြစ်အောင် အသေအချာ ပြုပြင်၏။ ဆံပင်ကိုလည်း အသေအချာ ပြန်ထုံးသည်။ “ဟယ် … တော့ … ပူ … ပူစီမ … အဟစ် … ဟယ် “ နာရီပေါင်းများစွာ လိုးကြခံကြပြီးကာမှ ပူစီမကို သတိရမိသော အဖြစ်ကို တွေးမိကာ တခစ်ခစ်နှင့် ရယ်မောမိပါတော့သည်။ ဒီကရှေ့ ပူစီမကို အငြိမ်းစားပေးတော့မယ်။ သူ့ထက် အဆပေါင်း သိန်းသန်းကုဋေကဋာ ကောင်းလွန်းလှသော ဂျစ်တူးကို တွေ့ထားပြီးဖြစ်၏။
“ကဲ … မောင်လေး .. မမ ပြန်မယ်နော် .. ဣနြေ္ဒရရ ပိပိရိရိနေ သိလား “
“ဟုတ်ကဲ့ပါ .. မမရ “ ဂျစ်တူးက မတင်ရီ၏ ထွားကား အိစက်နေသော ဖင်ဆုံကြီးကို လက်ဝါးနှင့် ညှစ်ဆုတ် ပုတ်ရိုက်၍ ကျီစယ်ရင်းပြောသည်။ ထို့နောက် .. သူမလာခဲ့သည့် လမ်းအတိုင်း ဣနြေ္ဒရရ ပြန်ထွက်သွားသည်။ ဂျစ်တူးသည် ပုဆိုးကောက်ပြီး အပြာစာအုပ်များကို စီထပ်သိမ်းဆည်းကာ တဘက်တစ်ထည် ပုခုံးပေါ်တင်လျှက် ရေချိုးရန် ထွက်လာခ့ေဲ တာ့သည်။ ညနေ (၆)နာရီခန့် အချိန်လောက်တွင် ဂျစ်တူး ဦးလေးတို့ တောက ပြန်လာကြ၏။ နေ့လည်က မတင်ရီနှင့် ကာမစစ်ပွဲအပြိုင် ဆင်နွှဲနေကြသည်ဖြစ်၍ ရေချိုးပြီး ခဏအကြာတွင် ဂျစ်တူး အိပ်ပျော်သွားသည်။ တစ်ရေးနိုးသောအခါ ဂျစ်တူးတစ်ကိုယ်လုံး အားအင်တွေ ပြည့်ဝပြီး လန်းဆန်းနေသည်။ ဂျစ်တူးတစ်ယောက် သူ့ဦးလေး၏ ဆေးအရက်ကို အတော်အထင်ကြီးသွားသည်။ ဒီဆေးအရက်မျိုး သောက်ပြီး မိန်းမချလို့ကတော့ တစ်ညလုံးတောင် ချနိုင်လိမ့်မည် ထင်သည်။
“သားက .. ဒီနေ့မှ ထူးထူးဆန်းဆန်း အိပ်လို့ပါလား “
“ဟုတ်ကဲ့ … ဒေါ်ဒေါ် .. စာဖတ်ရင်း အိပ်ပျော်သွားတယ် .. အဟင်း .. ဟင်း “ ဂျစ်တူး အဒေါ်က ခါတိုင်းလိုပင် ရိုးရိုးတန်းတန်း မေးလိုက်ခြင်း ဖြစ်သော်လည်း ကိုယ့်အကြောင်းနှင့်ကိုယ် မရိုးမသား ပြုလုပ်ထားသော ဂျစ်တူးတစ်ယောက် မလုံမလဲဖြစ်ကာ မျက်နှာတစ်ခုလုံး နွေး ကနဲ ရှိန်းကနဲ ဖြစ်သွား၏။
“ဒေါ်ဒေါ် … ကျွန်တော် ထွန်းရီိတို့အိမ် ခဏသွားအုံးမယ် “
“အေးအေး .. မိုးတော့ မချုပ်နဲ့နော်“
“ဟုတ်ကဲ့ပါ .. “
ဂျစ်တူးတစ်ယောက် အစီအစဉ် မရှိပါဘဲ နေ့လည်က ပြစ်မှုကြီးကြောင့် စိတ်ထဲမလုံ၍ ထွက်လာခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ထွန်းရီနှင့် ဂျစ်တူးတို့က ကျောင်းနေဖက် သူငယ်ချင်း၊ စီးပွားရေး အခြေအနေကြောင့် မနှစ်ကမှ
ကျောင်းထွက်လိုက်သည်။ သူတို့အိမ်က ရွာအနောက်ပိုင်းမှာ ဖြစ်သည်။ ထွန်းရီတို့က အရက်ချက်ရောင်း၏။ စံချိန်မှီ အရည်အသွေးကောင်းသည့်အတွက် အနီးအပါးရွာတွေကပါ လာရောက်ဝယ်ယူကြသည်။ ဂျစ်တူးရောက်သွားတော့ စက်ဘီးကယ်ရီယာခုံပေါ်တွင် ဧရာမပလတ်စတစ်ပုံးကြီးတင်၍ ကြိုးနှင့်ချည်တုတ်နေသည်။ ထွန်းရီက သူ့အလုပ်နှင့်သူမို့ ဂျစ်တူးရောက်လာတာကို မသိ။
“ဟေ့ကောင်ကြီး အဲဒါ ဘယ်သွားပို့ရမှာလဲ “ ဂျစ်တူး အသံကြားမှ ထွန်းရီက —
“ဟာ .. ခွေးကောင် .. အသံမပေး ဘာမပေးနဲ့ အနောက်ရွာ သွားပို့မလို့ကွ .. နေဝင်တော့မှာဆိုတော့ အဖော်ရအောင် လိုက်ခဲ့စမ်းပါကွာ .. “
“အေး .. အေး … လိုက်ခဲ့မယ် .. အဒေါ်တို့ စိတ်ပူနေမှာစိုးလို့ အိမ်ပြန်ပြောလိုက်ဦးမယ် .. တင်စရာ ရှိသေးလား .. ငါ ဘီးယူခဲ့မယ် “ “အေး .. ရှိသေးတယ် “ ဂျစ်တူး အိမ်တစ်ခေါက်ပြန်၏။ သူ့ဦးလေးနှင့် အဒေါ်ကိုပြော၍ စက်ဘီးယူပြီး ပြန်ထွက်လာသည်။ ဂျစ်တူး ဦးလေးနှင့် ထွန်းရီ အဖေတို့က ညီအကိုအရင်းလို ချစ်ခင်ကြသည်။ ဂျစ်တူးဦးလေးကလည်း မကြာမကြာ အရက်ဦးရေဝယ်လေ့ရှိသည်။ တစ်ခါဝယ်လျှင် ပုလင်း၅ဝခန့်
ဖြစ်သည်။ ထိုအရက်ဦးရေနှင့် သောက်ဆေး စိမ်ဆေး အားဆေးများ ဖော်စပ်သည်။ ထို့အပြင် အရက်ချက်နည်းကိုလည်း စနစ်တကျသင်ကြားထားပြီး၊ တောထဲကတဲမှာ ချက်၏။ အရက်တော့မဟုတ်၊ သမုန်းတောရှောက်မိုး၊ ဥသျှစ် အစရှိသော ဆေးဘက်ဝင် အပင်အခေါက် အရွက်တွေကို ထန်းလျက်နှင့်စိမ်ပြီး အရက်ချက်နည်းအတိုင်း ချက်ယူခြင်း ဖြစ်သည်။ ဂျစ်တူးနှင့် ထွန်းရီတို့ စက်ဘီးကိုယ်စီဖြင့် အနောက်ရွာဘက် ထွက်လာခဲ့သည်။ သူတို့ရွာနှင့် အနောက်ရွာက (၂)မိုင်ကျော်ခန့် ဝေး၏။ နှစ်ရွာကြားတွင် သုံးရေအတွက် အသုံးပြုသည့် ဆည်ပေါက်တစ်ခု
ရှိသည်။ ကန်လောက်မက၊ ဆည်လောက်လည်း မကြီးသဖြင့် ဆည်ပေါက်ဟု ခေါ်ခြင်းဖြစ်၏။ တစ်နှစ်ပတ်လုံးရေ ရှိသော်လည်း ဆပ်ပြာကြမ်းပေါက်သော မြေမို့ သောက်မရ၊ နွားစာကျွေးရန်နှင့် ချိုးရေအဖြစ်သာ သုံးလို့ရသည်။ ဆည်ပေါက်နားအရောက်တွင် ရေစည်တိုက်လာသော မဝင်းခင်နှင့် တွေ့၏။ မဝင်းခင်က အသားညိုညို ၊ ခပ်တောင့်တောင့် လုံးကြီးပေါက်လှ အမျိုးအစားဖြစ်သည်။ အဝါညိုရောင်သမ်းပြီး စိုပြေချောမွတ်သော အသားအရေမျိုး ဖြစ်၏။ အသက်က (၂၈)နှစ်လောက် ရှိပြီမို့ ဂျစ်တူးထက် (၁၀)နှစ် ကျော်ကျော်လောက်ကြီးမည်။
နေ့လည်ကပင် သူ့လူပျိုနုနုထွတ်ထွတ်ဘဝကို မတင်ရီ စောက်ဖုတ်ကြီးလိုးပြီး ခဝါချ သိဒ္ဒိတင်ပြီးပြီမို့
စောက်ဖုတ်အကြောင်း ပူပူနွေး နွေးကြီး သိထားသော ဂျစ်တူးက စောက်ဖုတ်ပါသော
မိန်းမတွေကိုကြည့်လျှင် ထောင့်ငါးရာဗို့အားဖြင့် ကြည့်မိတော့၏။ ယခင်လို ရှက်ရွံ့ ခြင်း မရှိတော့။
ခေါ်တောကုလားလို မရိုင်းသည့်တိုင် မဓာတ်၏ သဘောသဘာဝကို ကြည့်ရင်းဖြင့်ပင် ဝေဖန်ပိုင်းခြား ဖြစ်သွားသည်။
“ဟဲ့ … ထွန်းရီ နေဝင်ခါနီးမှ ဘယ်တုံး “ မဝင်းခင်က ရေစည်ကို ကျောမှီရင်း ဒူးထောင်ပေါင်ကားထိုင်လျှက် နွားမောင်နေရာမှ လှမ်းမေး၏။ ဂျစ်တူးနှင့် မေးထူးခေါ်ပြောမျှသာ ဖြစ်၍ ထွန်းရီလောက် မရင်းနှီးသဖြင့် ထွန်းရီကိုသာ နာမည်တပ်၍ မေးလိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။
“အနောက်ရွာ အရက်သွားပို့မလို့ မမ “ “ဟင်း .. နင်တို့ဟာ အခုချိန်ကြီးကျမှ “ မဝင်းခင်က မကြာခင် မှောင်ရီပျိုးတော့မည်ကို ရည်ရွယ်၍ ပြောလိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ထမီကို ခပ်တိုတို ဝတ်ထားသဖြင့် ဒူးခေါင်းစပ် အောက်ပိုင်းရှိ တင်းရင်းညိုဝင်းနေသော ခြေသလုံးသားတွေကို ဂျစ်တူးက ကြည့်ဖြစ်အောင် ကြည့်လိုက်သည်။
“ထွန်းရီရေ ည လာဖြစ်အောင် လာနော် .. လက်ဖက်သုတ်ထားမယ် “
“အင်းပါ “ မဝင်းခင်က ထွန်းရီကို ဦးတည်၍ ပြောသည်။ ပြီးတော့ သူ့မျက်ဝန်းထဲတွင် ထွန်းရီနှင့် သူမတို့
ချိန်ဆက်ရှိထားသော အထာသင်္ကေတတွေပါ၏။ ထို မရိုးသားသော အထာသင်္ကေတများကို ကြည့်၍
မဝင်းခင်နှင့် ထွန်းရီတို့ ညိနေပုံရကြောင်း ဂျစ်တူးက ရိပ်မိလိုက်သည်။
နှစ်ယောက်သား စကားတပြောပြောနှင့် စက်ဘီးကို ဂရုစိုက်နင်းလာကြရင်း ဂျစ်တူးက ပြောလက်စ စကားကို ဖောက်၍ —
“ဟေ့ကောင် … မဝင်းခင် ကိုယ်လုံးကိုယ်ပေါက်က မိုက်တယ်နော် … ဆော်ချင်စရာကြီး .. ပြီးတော့ မင်းကိုကြည့်တဲ့ အကြည့်က မရိုးသားဘူးဗျ .. မင်းကို အသဲအသန် ကြိုက်နေတဲ့ ပုံကြီး .. ငါ့ကိုတောင် စကားထဲ ထည့်မပြောဘူး .. ပြီးတော့ သူ့ယောက်ျားကလဲ ရွှေတောဘက် တက်သွားတယ်ဆို .. ဟား .. မင်းအတွက် အကွက်ပဲဟေ့ .. လက်ဖက်သုတ်လဲ အုပ်ရင်း စောက်ဖုတ်ကြီးလဲ လုပ်ရင်းပေါ့ကွာ .. ဟား .. ဟား “ ဂျစ်တူး၏ မြှောက်ပင့်သံပါသော အပြောကြောင့် ထွန်းရီသဘောတွေ ကျသွားသည်။ သူ့ကိုယ်သူလည်း အထင်ကြီးသွား၏။ ထွန်းရီဆိုတဲ့ကောင်က မြှောက်ပေးလျှင် ဂွေးပေါ်အောက် ကတတ်သည့် လူမျိုး။ မဝင်းခင်နှင့် သူနှင့် ဖြစ်ကြပုံကို ကြွားချင်လာသည်။ ထွန်းရီ အသက်က ဂျစ်တူးထက် တစ်နှစ်
ကျော်ကျော်ကြီးသဖြင့် အမွှေးအတောင်စုံသည့် လူပျိုဖြစ်နေပြီ မဟုတ်လား။
“ဟေ့ကောင် .. ဘယ့်နှယ်လဲ တောင့်တောင့်ဖြောင့်ဖြောင့် ညိုချောကြီးဗျ .. “ ဂျစ်တူးက ထပ်ဆွသည်။ နဂိုကမှ ကြွားချင်လှသော ထွန်းရီက ..
“မင်းပြောတာကမှ နောက်ကျနေသေးတယ် .. မဝင်းခင်နဲ့ ငါနဲ့ ချိန်းချိန်းတွေ့တာ အခါ ၂ဝမကတော့ဘူး .. ဟဲ .. ဟဲ “
“ဟား .. တယ်ဟုတ်ပါလား .. လုပ် .. လုပ်စမ်းပါအုံး .. ဇာတ်လမ်းလေး ပြောပြပါအုံး “
“ဟ … မင်းနဲ့မှ သိပ်မတွေ့ရပကွဲ .. ဘယ်လိုလုပ် ပြောရမှာလဲ “ ဟုတ်တော့လည်း ဟုတ်၏။ ကျောင်းပိတ်ကတည်းက ဂျစ်တူးတစ်ယောက် အိမ်တွင်းအောင်းပြီး အပြာစာအုပ်တွေချည်း လှိမ့်ဖတ်နေသည် ဖြစ်ရာ အခုမှ ထွန်းရီနှင့် တွေ့ကြုံခြင်း ဖြစ်သည်။
“အေး … အေး .. လုပ်ပါ … လုပ်ပါ … အခု တွေ့ပြီပဲ ဆရာရယ် … ဆရာ့ဇာတ်လမ်းလေး ပြောပြပါအုံး “ ဂျစ်တူး တကယ် သိချင်ပါသည်။ သူ့မှာတော့ ဒီနေ့ကျမှသာ မိန်းမစောက်ဖုတ်ကို လိုးဖူးခြင်း ဖြစ်၏။ အခု ထွန်းရီက သူနှင့် မဝင်းခင်တို့ ချိန်းချိန်းတွေ့ကာ အခါ၂၀ မကတော့ဘူးဆိုတော့ ဒီအချက်မှာ သူ့ထက် အဆပေါင်းများစွာ သာသွား၏။ အိမ်ချင်းကလည်း ကပ်လျှက် မလုံမခြုံ စည်းရိုးသာ ခြားထားသဖြင့် ထွန်းရီပြောတာ လုံးဝ ဖြစ်နိုင်သည်။ ပြီးတော့ — မဝင်းခင် ယောက်ျားက အရက်သမား။ ထွန်းရီက ဘာစကားမှ မပြောဘဲ စက်ဘီးကိုသာ သဲကြီးမဲကြီး နင်းနေသဖြင့် —
“ဟေ့ကောင် .. ပြောလေကွာ .. အချင်းချင်း ဈေးကိုင် မနေနဲ့ “ ဂျစ်တူးက အမြင်ကပ်လာသဖြင့် ခပ်ဆတ်ဆတ် ပြောလိုက်သည်။
“အေးပါဟ .. ချီးမှပဲ .. ရှေ့လဲကြည့်အုံး သူများရွာပေါက် ရောက်နေပြီ .. အပြန်ကျမှ အေးအေးဆေးဆေး ပြောကြမယ် “
“အိုကေ .. အိုကေ “
နှစ်ယောက်သား အရက်ပုံးတွေ အပ်ပြီး၊ စက်ဘီးကို ခပ်သုတ်သုတ် နင်းလာကြရာ ရွာအနီးသို့
ပြန်ရောက်လာ၏။ ရွာအဝင်ပေါက်နှင့် မနီးမဝေးရှိ ကုက္ကိုပင်ကြီး အောက်တွင် ခေတ္တနားလိုက်ကြသည်။
“ဟေ့ကောင် ပြောတော့ “ ဂျစ်တူးက ကွပ်ပြစ်ပေါ် ထိုင်မိလျှင်ပဲ လောဆော်တော့၏။
“အင်း .. အခါ ၂ဝဆိုတော့ ဘယ်ကစပြောရပါ့ “
“ပထမဆုံး စဖြစ်ပုံကို ပြောပြကွာ “
“အေး .. အေး .. သူနဲ့ငါနဲ့ သူ့အမေ ဒေါ်လှကြည် သေလို့ သဂြိုလ်တဲ့နေ့ကစပြီး ဖြစ်တာပကွဲာ .. (၀ါ) စလိုးကြတာပေါ့ကွာ .. ဟား .. ဟား “
“မအေလိုးနှယ်ဗျာ (၀ါ)တွေ ဘာတွေနဲ့ လျှာရှည်လိုက်တာ “ ဂျစ်တူးက တကယ်ပင် စိတ်တိုလာ၍ ပြစ်ပြစ်နှစ်နှစ် ဆဲထည့်လိုက်သည်။ “အေး … အေး … ဒီလို … ဒီလို “
အပြာစာအုပ်သေးသေးလေးတွေရဲ့ ထုံးစံအတိုင်း ဇာတ်လမ်းက တစ်ပိုင်းတစ်စနဲ့ ရပ်သွားတယ်ဗျာ … ထွန်းရီပြောတဲ့ မဝင်းခင်အကြောင်း ကိုယ့်စိတ်ကူးနဲ့ကိုယ်သာ အတွေးကွန့်မြူကြပါတော့ .. ဟီးSHARE